မျိုးဆက်ချင်းကွာဟမှု — Steemkr
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏လယ်ကွင်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောနေကြသည်နှင့်ဒါလူအ, သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေ, အယူအဆတွေနှင့်၎င်းတို့၏ခြုံငုံအပြုအမူများ၏လူနေမှုလမ်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောသားစဉ်မြေးဆက်ပိုင်ဆိုင်လူတွေကွဲပြားခြားနားပြုမူခြင်းနှင့်မျိုးဆက်ကွာဟမှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသောအယူဝါဒ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိသည်။
ဘယ်လိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Gap ပျေါလှငျပါသလဲ
မတူညီတဲ့အစဉ်အဆက်ပိုင်လူပြီးနောက်မျိုးဆက်ကလေး Boomers ဟုချေါသညျ, လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မီမွေးဖွားသူတို့သည် Traditionalists အဖြစ်ချေါပွီဥပမာကွဲပြားခြားနားသောအမည်များပေးထားပြီ, 1965 နဲ့ 1980 ခုနှစ်အကြားမွေးဖွားသောသူတို့အားမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ X ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်သူတို့အားမွေးဖွားနေကြသည် 1980 ခုနှစ်အကြားနှင့် 1999 ရှင်းလင်းစွာဤအစဉ်မြေးဆက်တို့အကြားကွာဟချက်ကိုပြသသောအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်အဆိုပါမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Y. အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဤတွင်တူမှာကြည့်သည်:
အဟောင်းသားစဉ်မြေးဆက်ပိုင်ဆိုင်ပြည်သူ့ပူးတွဲမိသားစုစနစ်ကနေထိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ခွဲဝေမှုနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ဤအယူအဆအစဉ်အဆက်ကိုကျော်ယိုယွင်းဆိုးရွားခဲ့သည်။ လက်ရှိမျိုးဆက်လွတ်လပ်မှုကိုလိုလားနှင့်ပူးတွဲမိသားစုများနေထိုင်၏အစဉ်အလာလမ်းအောက်ပါအတိုင်းသူမည်သူမဆိုခဲရှိသေး၏။ လူမျိုး၏ခြုံငုံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
မျိုးဆက်ပြီးနောက်မျိုးဆက် - pre-လွတ်လပ်ရေးခေတ်မှပိုင်ဆိုင်လူများကပြောပြီဟိန်ဒီယနေ့ပြောပြီခံနှင့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သဖြစ်ပေါ်မထံမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျိုးဆက်ဖြင့်အစောပိုင်းကတဦးတည်းအနေဖြင့်အချို့သောဌာနခွဲကိုဘန်းစကားတစ်ခုအုပ်စုအသစ်ချမှတ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအိမ်တွင်အစဉ်အဆက်အဖြစ်အလုပ်ခွင်မှပိုင်ဆိုင်သောလူတို့အကြားဆက်သွယ်ရေးတခါတရံကြောင့်ဘာသာစကား၌ဤပြောင်းလဲမှုအတော်လေးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။
လူတွေမှပိုင်ဆိုင်နေစဉ်အစောပိုင်းကသားစဉ်မြေးဆက်လမ်းညွန်ယူပြီးမှာကောင်းသောတို့တစ်ခုတည်းအလုပ်ရှင်အပေါ်သစ္စာ ရှိ. , လူတွေကဒီရက်အတော်လေးလျင်မြန်စွာပျင်းရမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသို့မဟုတ်အချိန်များတွင်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များအလုပ်တစ်ခုရတဲ့၏ပင်လအတွင်းရှာကြာလော့။ အဆိုပါဗိုလ်ချုပ်ကြီး Y ကိုလူတွေကဆန်းသစ်ဖြစ်ကြပြီးအစားဆင်ကန်းတောတိုး၎င်းတို့၏သူဌေးထံမှလမ်းညွှန်ချက်တာထက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းမျှဝေအကောင်အထည်ဖော်ချင်ပါတယ်။
အဟောင်းသားစဉ်မြေးဆက်ပိုင်ဆိုင်အမျိုးသမီးများအများအားဖြင့်အိမ်တွင်းမှချုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကသာအိမ်၏ယောက်ျားများ၏အရာကြီး, အိမ်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်သူတစ်ဦးအဖြစ်ရှုမြင်ထွက်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြားဆီသို့ဦးတည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောထားကအစဉ်အဆက်အပေါ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အမျိုးသမီးတွေပဲယောက်ျားအဖြစ်ကိုသူတို့ရှေးခယျြမှုနှငျ့အလုပျမဆိုလယ်ကွင်းထဲဝငျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
တဦးတည်းမျိုးဆက်မှပိုင်ဆိုင်ပြည်သူ့သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သောတခြားကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မတူညီတဲ့အစဉ်အဆက်ကနေလူတွေကိုလုံးဝ '' တခြားသူတွေ၏ရှုတ်ချနေချိန်တွင်အခြားအပေါ်မိမိတို့၏စိတ်ကူးများနှင့်ယုံကြည်ချက်စည်းကြပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါသို့သော်ပြဿနာပေါ်ပေါက်။
esteem good-karma generation gap human
Generation gap is not invisible prior
generation wave analysis is world wide issue.
this is very interest the process of human.
generation gap have in every country
taitano41 · 2년 전
the photo is very meaningful